» “युवा पुस्ताको नजरमा ७२ घन्टे चक्की”
“युवा पुस्ताको नजरमा ७२ घन्टे चक्की”
लेखक : महेश घिमिरे ( केदार )
बुटवल हस्पिटल लाइन निरै रहेको एक औषधि पसल अगाडी एउटा मोटरसाइकल रोकिन्छ । उक्त मोटरसाइकलको पछाडि कलेज ड्रेसमा मार्क्स लगाएकि अन्दाजी १६, १७ वर्षकी एक युवती सो मोटरसाइकलबाट ओर्लिन्छिन । र साम्मुनय रहेको औषधि पसल भित्र छिरछिन् । अनि औषधिपसले सगं आइपिल ७२ घन्टे माग्छिन र आइपिल को ८० रुपैयाँ दिदै टेबलमाथि रहेको पानीको बोत्तल खोलि सो आइपिल पानि संग घुटुक्क निल्छिन् । र हतारिदै ऊक्त मोटरसाइकलमै बसेर अगाडि बढछिन् । अनि त्यसको केही समयपछि फेरि अन्दाजी २०, २१ वर्षका युवा(युवती हिढ्दै औसधि पसल नजिक आइपुग्छन्। युवती चाहिँ अलमल( अलमल गरेजस्तो गरी औषधि पसल बाहिरै बस्छिन् । युवा चाहिँ औषधी पसले सँग इकोनू किनि खोल डस्बिनमा फ्याकि ट्याब्लेट मात्र लिएर युवती तर्फ लाग्छन् । केही समयको अन्तरालमा देखिएका यि दृश्य त केबल प्रतिनिधि दृश्य मात्र थिए । समयको तीव्र रफ्तारसँगै युवा पुस्ताहरु पनि आधुनिक हुँदै गइरहेका छन् ।
समाज जसरी दुर्तगतिमा परिवर्तन हुँदैछ । त्यसै गरी आज युवा पुस्ताहरुको यौवन, प्रेम अनि सम्बन्ध पनि परिवर्तित हुँदै गइरहेको छ । हिजो निकै ठूलो कुरा मानिने यौनसम्पर्क आजको युवा पुस्ताले निकै सामान्य रुपमा लिन थालेका छन् ।
युवा(युवतीहरुमा विपरित लिङ्ग प्रतिको आकर्षण र यौन कौतुलताका कारण पनि स्कुल अथवा कलेज जाने उमेर मै लभ गर्ने एउटा फेसन चलेको छ ।
लभ नगर्ने युवायुवतीहरु आधुनिक युवा पुस्ताको नजरमा हाँसो को पात्र बनेका छन् । शारीरिक आकर्षणमा लिप्त आजका युवा पुस्ताहरुको यौवन, प्रेम अनि सम्बन्ध बच्चाबच्चीमा खेलिने भाँडाकुटी खेल जस्तो बनेको छ । क्षणिक समयको लागी मनोरञ्जन गर्ने माध्यम बनेको छ ।
सामाजिक संजालको लतमा फसेका युवापुस्ताहरु आज बन्द कोठा भित्र बसि सामाजिक संजालको माध्यमबाट सन्सार भर देखिएका राम्रा( नराम्रा पक्षलाई नियालेका छन् । जस लाइ आत्मसात गर्दै आफुलाई जबरजस्ती तरिकाले आधुनिकता को नाममा परिवर्तित गर्दै आएका छन् । पछिल्लोसमय युवा पुस्तमा सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग भन्दा पनि दुरुपयोग बढी भएको देखिन्छ । हो सामाजिक सञ्जालबाटै माया प्रेम गर्छन् । अनि प्रेममा योन मिसाई दुई दिन मै सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट बिछोड हुन्छन् । आज हेराहेर भोलि प्रेम अनि पर्सी ब्रेकअप अहिलेका युवा पुस्तामा यही परिपाटी हाभि भएको देखिन्छ ।
जवानीको जोश लाई थप सक्रिय बनाउन आजका युवायुवतीहरु सामाजिक संजाल,फेसबुक तथा युट्युब मा बढी सक्रिय छन् । जसका माध्यमबाट सजिलै हेर्न सकिने अश्लिल फोटो अनि भिडियोहरु र खुलेआम इन्टरनेटमा चलिरहेका पोर्न साइट हरुका कारण पनि सानै उमेरमा विपरीत लिंगीवीच असुरक्षित यौन सम्बन्ध राख्ने क्रम वृद्धि भएको छ । जस्ले गर्दा आज युवा पुस्ताहरु बिहेअघि वा बिहेपछिको पर पुरुष संगको सम्बन्धलाई सामान्य रुपमा लिन थालेको पाइन्छ ।
युवाहरुका प्रेमजोडीहरु हुन् । वा विदेश या स्वदेशमा रहेका बैसालु महिला वा पुरुषहरू चाहे त्यो डेटिङमा होस् । चाहे त्यो बन्दकोठाभित्र गरिएको यौनसम्पर्क होस् । उक्त यौनसम्पर्क गरिसकेपछि गर्भ चाहिँ नरहोस् भन्ने चाहन्छन् । जसले गर्दा आज आकस्मिक गर्भनिरोधक ७२ घन्टे चक्कीहरुको प्रयोग गर्नेमा कलेज र स्कुले छात्राहरु बढीमात्रामा सक्रिय भएको देखिन्छ । भने विवाहित महिलाहरूको सवालमा निकै कम मात्रामा प्रयोगमा आएको पाइन्छ ।
क्षणिक रमाइलोको लागि उमेर नै नपुगी शारीरिक सम्पर्क राख्ने भर्खरका युवा युवतीहरु माज यि ७२ घण्टे चक्कीहरु अत्यन्तै लोकप्रिय भएको छ । हो उनीहरुको लागि आज यो ७२ घण्टे चक्की यौन सारथी बनेको छ । जो सुकै होस् । जुन अवस्थामा होस् । डाक्टर हरुको प्रेस्कृप्सन बिना सहज रुपमा बजारमा उपलब्ध हुने विभिन्न कम्पनीहरुले उत्पादन गरेका यस्ता ७२ घण्टे चक्कीहरुले गर्दा पनि युवा पुस्ताहरुलाइ यौनसम्पर्क गर्ने गतिलो माध्यम का साथै सहजता र प्रोत्साहन मिलेको देखिन्छ । जस्ले गर्दा असुरक्षित यौनसम्पर्क गरेको ७२ घण्टाभित्रमा आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की खाएपछि गर्भ बस्दैन भन्ने अपुरो मान्यता बोकेका युवा पुस्ताहरुको लागि यो ७२ घन्टे चक्की यौनसम्पर्क गर्ने गतिलो माध्यम बनेको छ । हो हतार र असुरक्षित यौन सम्बन्धका लागि वरदान बनेको छ । त कतिपय युवायुवतीहरु यौनको रंगमञ्चमा अपूर्ण ज्ञान बोकि यही चक्कीमै निर्भर हुने गरेका छन् ।
जवानीको जोस बोकी यौन खोज्दै हिँड्ने युवा पुस्ताहरुलाइ सामान्य रोग अथवा औषधिहरु सम्बन्धी बरु जानकारी नहुनसक्छ । तर विभिन्न कम्पनीहरुले उत्पादन गरेका यि आकस्मिक गर्भनिरोधक ७२ घण्टे चक्कीहरु प्रति ऊनिहरु जानकार छन् । सके उनीहरूको गोजीमा नसके उनीहरूको मुखमा त अवश्य झुन्डिएकै हुन्छ । त्यसैले पनि होला हिजोआज विभिन्न कम्पनीहरुले उत्पादन गरेका आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की ( म्याक्स सेभेन्टि टु, इ सेभेन्टि टु, अनवान्टेड, इकोन लगायतका विभिन्न नाममा उपलब्ध हुने यस्ता आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की हरु को बिक्रीवितरण ले ठुलो बजार लिएको देखिन्छ । विभिन्न नाममा उपलब्ध हुने यस्ता चक्कीहरु अहिलेका युवतीहरु ले अत्यधिक रूपमा बढी प्रयोग गर्ने गरेको तथ्य हरु बाहिर आइरहेका छन् ।
यसरी युवा पुस्ताको रोजाइमा परेको यो ७२ घण्टे चक्की ले अनिच्छित गर्भ रहन नदिएपनि यसले सेक्सुअल कन्ट्याक्टबाट सर्ने यौनरोगहरू लाइ भने रोक्न अवस्य सक्दैन । जस्ले गर्दा एचआईभी, एड्स जस्ता थुप्रै यौनरोग हरु ले भयाभव रुप लिने होकी भन्ने त्रास फैलाएको छ । भने अर्कोतिर युवा पुस्ताहरु यस्ता चक्कीहरु प्रति आकर्षित हुन थालेपछि हिजो आज मेडिकल, स्वास्थ्यचौकी हरुमा कण्डमहरु को बिक्रीवितरण पनि अत्यन्तै कम मात्रामा हुन गएको पाइन्छ ।
युवा पुस्ता मात्र नभएर आम मानिसहरुमा कण्डमको प्रयोगले यौनी र लिङ्गको सम्पर्क हुँदा सन्तुष्टि नहुने विश्वास गर्छन् ।
तर विभिन्न अध्ययनले भने कण्डमको प्रयोगले यौनसम्पर्कको समयलाई कुनैपनि प्रभाव नपार्ने पुष्टि गरिसकेका छन् ।
वास्तवमा कण्डमलाई बहुउपयोगीका रुपमा लिन सकिन्छ । कण्डम यौनजन्य रोग को संक्रमणबाट पनि बचाउने र गर्भधारण पनि रोक्ने एकमात्र प्रभावकारी अस्थाई साधन हो । कतिपयले कन्डम लगाउँदा यौनक्रिडामा आनन्द आउदैन भन्ने पनि गर्छन । तर म भन्छु। कण्डमको सही छनोट र प्रयोगले आफ्नो यौन जिवनलाई अझै रोमाञ्चक सुरक्षित बनाउन पनि सकिन्छ । त्यसैले कन्डम लाइ उपयोगिता र सुरक्षाका लागि मात्र नभएर मनोरञ्जनका लागि पनि उत्कृष्ट अस्थायी साधनको रुपमा लिइ प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
आधुनिक जीवनशैलीमा रमाउने युवा पुस्ताहरु आफ्नो पहिलो सेक्स छोटो अवधिमा समाप्त गर्न चाहँदैनन् । अर्थात् आफ्नो सेक्सलाई लामो समयसम्म टिकाउन आजका युवा पुस्ताहरु विभिन्न माध्यमहरुलाई आत्मसात गरिरहेका छन् । यसरी जवानीको जोस मा फाइदा मात्र देख्ने तर बेफाइदा नदेख्ने युवा पुस्ताहरुमा पछि गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य जटिलताहरु नआउला भन्न सकिंदैन ।
आखिर के हो त यो ७२ घण्टे चक्की ?
सरल भाषामा भन्नुपर्दा असुरक्षित यौनसम्पर्क भएपछि। गर्भवती हुनबाट रोक्न मद्दत गर्ने हर्मोनयुक्त महिलाले खाने चक्की हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओ ले आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीका रूपमा लिभोनोरजेस्टेल र युलिप्स्टिल लाइ मान्यता दिएको छ । यो चक्की असुरक्षित यौनसम्पर्क भएको ५ दिन अर्थात १२० घण्टा भित्रमा खाइसक्नुपर्ने हुन्छ । लिभोनोरजेस्टेल १.५ मिलिग्रामको एकमात्र बराबर खानुपर्ने डब्लूएचओ ले बताएको छ । भने त्यस्तै युलिप्स्ट्लि ३० मिलिग्राम लिनुपर्ने डब्लुएचओको तथ्य पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
वैकल्पिक रुपमा भने महिलाले लिभोनोरजेस्टेल लाई ७५ मिलिग्रामको दुई चक्की १२ घन्टाको फरकमा पनि खान सकिने डब्लूएचओ को गाइडलाइन मा ऊल्लेख गरेको । कुनै पनि कारणवश गर्भनिरोधको सुरक्षा उपाय अपनाउन असक्षम भएको स्थितिमा यो आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की लाइ अवलम्बन गर्न सकिन्छ । आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको उपयोग गर्दा सतप्रतिशत गर्भ भने रोक्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । डब्लूएचओका अनुसार ठिक समयमा यसको प्रयोग गर्न सके गर्भ रोक्नमा ५२ देखि ९४ प्रतिशत मात्र प्रभावकारी हुन्छ ।
असुरक्षित यौनसम्पर्क पछि कति चाडो यो औषधि उपयोग गरिएको छ । महिनावारी कुन अवस्थामा छ। तथा कस्तो प्रकारको औषधी खाइएको छ । भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ । यदि उक्त औषधी जति चाँडो खाइयो त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ । आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की यदि २४ घण्टाभित्रमा खाएको छ । भने यस्तै ९५ प्रतिशत प्रभावकारी हुन्छ। भने २५ देखि ४८ घण्टामा खाएको छ । भने ८५ प्रतिशत र त्यसपछि खाँदा त्यसको प्रभावकारिता अझ कम(कम हुँदै जान्छ । भन्ने कुरा डब्लूएचओ को तथ्य पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
के यो ७२ घण्टे चक्की सुरक्षित छ त ?
यो ७२ घण्टे चक्की आकस्मिक घटनामा एक(दुई पटक को प्रयोग ले खासै असर नगर्ने तर यस्लाई अन्य परिवार नियोजनको साधन जस्तै ठानी नियमित जस्तै प्रयोग गर्नु भनेको स्वास्थ्य मा गम्भीर जटिलता निम्ताउनु हो । यो चक्की स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पूर्णरुपमा सुरक्षित छ । भन्न सकिने अवस्था छैन । महिलाहरुले प्रयोग गर्ने यस्ता आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीहरुमा शरीरमा हुने भन्दा फरक हर्मोन हुने हुनाले एक अर्को हर्मोन बिच सघंर्ष गरेर अर्थात् सामान्य शारीरिक प्रक्रियालाई यो औषधिले अनियमित गराएर गर्भ बस्न दिँदैन । यस्ता हर्मोनयुक्त औषधिको प्रयोग पश्चात ऊक्त औषधिमा हुने हर्मोन महिलाको शरीरमा रहन सक्ने हुनाले महिलाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर आउनुको साथै पटकपटक शरीरका नियमित प्रणालीमा बाह्य अवरोध सिर्जना गरिदिँदा महिला हरुमा मानसिक देखि शारीरिक स्वास्थ्य समस्या हरु आइपर्न सक्ने र यस्ता हर्मोनयुक्त चक्कीहरुको बारम्बार प्रयोग ले महिलाहरुको मासिक चक्रमा समेत असर गरि कहिले समय भन्दा अगाडि त कहिले महिना पुगेको लामो समयपछि मात्रै महिलाहरु महिनावारी हुने गरेका तथ्यहरु वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।
महिलाको पाठेघर अत्यन्तै संवेदनशील अंग हो। जुन अगं बिना प्रजनन प्रणाली नै सम्भव हुन सक्दैन। चेतनाको अभाव, अल्पज्ञान र गलत प्रवृत्तिले गर्दा आज त्यहि सम्बेदनशील अंग का बिभिन्न समस्या हरु बोकि बस्न बाध्य छन् । कतिपय महिला हरु यस्ता चक्कीहरुको प्रयोग ले असुरक्षित यौनसम्पर्क पश्चात् पाठेघरभित्र अथवा नलिमा विकास भएको वा हुन लागेको भुर्ण लाई असर गरि गर्भ बस्न दिँदैन । जसकाकारण पाठेघरको नलि फुट्न सक्ने खतरा को साथ मा महिलाहरुलाई अत्याधिक रक्तश्राव हुने र पाठेघरमा बारम्बार ईन्फेक्शन भैरहने सम्भावना हुन्छ ।
यस्ता स्वास्थ्य जटिलता प्रति सजक र सम्बेदनशील नहुँदा आज महिलाहरु गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्या बाट गुज्रिरहेका छन् । हिजो आज सन्तान नभएको र गर्भ नबसेको पिरलो बोकि गुनासो गर्न हस्पिटल धाउने मध्ये कतिपयको पाठेघरमा क्षति भइसकेको हुने स्त्रीरोग विशेषज्ञहरू बताइरहँदा । यस बारे सचेत गराइरहदा यस्ता आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग र गर्भपतन गर्नेहरुको संख्या झन् पछि झन् बढ्दै जानुले चिन्ताको विषय सिर्जना गरेको छ ।
यो आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको बारम्बार प्रयोग गर्नु भनेको बगिरहेको खोलामा बाँध हालेजस्तो हो एकचोटीका लागि रोकिन सक्छ । तर नियमित यसैगरी रोक्न थाल्यो भने बाँध पनि भत्किन सक्छ ।
यसरि आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग लाइ निरन्तरता दिदै जादा महिलाहरुमा प्रोजेस्टेरोन हर्मोन नै उत्पादन बन्द हुन सक्ने खतरा हुन्छ । प्रोजेस्टेरोन एउटा यस्तो महिला हर्मोन हो। जसले डिम्ब निष्कासन तथा गर्भ बस्न मा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
जुन प्रोजेस्टेरोन हर्मोन नै उत्पादन नहुँदा पछि गर्भ नै नबस्ने । र महिलाहरुमा बाँझोपनको समस्या आउन सक्ने विशेषज्ञहरु बताउँछन् । तसर्थ यस्ता आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग र गर्भपतन गर्नु पूर्व स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनु पर्दछ ।‌ कतिपय अवस्थामा आकस्मिक गर्भनिरोध चक्की खान अर्थात गर्भपतन गर्न मिल्दैन जस्तै स्( अनियमित रजस्वला भएका, रक्तअल्पता भएका, उच्च रक्तचाप भएका, पाठेघरमा संक्रमण भएका, दमरोग, मुटुरोग र यौन रोग लागेका वा समस्या भएकाहरुले आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की को प्रयोग अर्थात गर्भपतन गर्न मिल्दैन ।
युवा पुस्ताहरु सेक्स अवधी लामो होस् र गर्भ पनि नबसोस् भन्ने बाहानामा विभिन्न किसिमका प्रवृत्तिहरूलाई आत्मसात गरिरहेका छन् । बजारमा सहज रुपमा उपलब्ध हुने आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की, यौन उत्तेजित बनाउने औषधि र अन्य तरिकाले गर्भपतन गर्नु लाइ युवापुस्ता हरुले सहजैरुपमा लिने डरलाग्दो प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।
आधुनिकता को नाममा जबर्जस्त परिवर्तित युवा पुस्ता को जीवनशैलीको प्रभावले आज युवा पुस्तामा विवाहपूर्वको शारिरीक(सम्बन्ध बढिरहेको छ । हो नयाँ पुस्ताहरु आज यौनमा उदार हुँदै गइरहेका छन् । सचेतना विना अपरिपक्क ऊमेरमा नै यौन लाई मात्र स्वीकार गर्ने गलत प्रवृत्तिले गर्दा आज युवायुवतीहरू आफ्नो जिवन भयाभह बनाइरहेका छन् ।
यौनसम्पर्क गर्दा असुरक्षित गर्ने तर पछि सुरक्षाका लागि भन्दै आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको सहारा लिने र गर्भपतन गर्ने युवतीहरूको संख्या जति बढ्दो छ । आज त्यति नै यसको साइडइफेक्ट भएर स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल धाउनेको संख्या पनि उत्तिनै छ ।
वर्तमानका आशा र भविष्यका कर्णधार मानिने शिक्षित युवा पुस्ताहरु नै आज यसरी दीर्घकालीन असरहरूलाई व्यवस्था गर्दै क्षणिक समयको रंगमञ्चमा रनभुल हुदै।। अल्पज्ञानको डोरि छोपि दौडिँदै जाँदा भोलि यि युवा पुस्ता हरु कहाँ पुग्ने हुन् चिन्ताको विषय बनेको छ ।
एकाइसौं सताब्दीका युवा पुस्ताले ज्ञान र स्वतन्त्रता त पाए तर दुइटै अपुरो भयो । ज्ञान यतिमात्र पाएकि कुनै आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की को प्रयोग गर्दा गर्भ रहदैन र स्वतन्त्रता त्यसलाई मात्र ठाने कि प्रेम सम्बन्ध अर्थात ब्वाइफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड भएपछि यौनसम्बन्ध राख्न केहि फरक पर्दैन भन्ने अपूर्ण मान्यता बोकि यौनको रंगमञ्चमा हराइरहेका छन्।
आज युवा पुस्तामा यौनशिक्षाको साथै परिवार नियोजनका अस्थायी साधन र यौनरोग समबन्धि ज्ञानको ठूलो अभाव छ। जस्ले गर्दा आज युवा पुस्ता हरु माज आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की र गर्भपतनसम्बन्धी ऊनिहरु को बुझाई अपुरो देखिन्छ । उनीहरुमा कन्डम प्रयोग गर्दा प्रशस्त यौनसन्तुष्टि प्राप्त नहुने ।
आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की र गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको भरपर्दो साधन ठान्ने । र सेक्सुअल कन्ट्याक्ट बाट सर्ने प्राणघातक रोगहरू प्रति सजगता नअपनाउनु जस्ता भ्रम व्याप्त रहेकाले उनीहरु आज स्वास्थ्यको ख्याल नगरी कण्डमलाई व्यवस्था गर्दै लगातार आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग र गर्भपतन को बाटो रोजिरहेका छन् ।
यसरी परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने संख्या घट्दै जानु र आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की को प्रयोग र गर्भपतन गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानु आज एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ । तर अफसोच वर्तमानका आशा र भविष्यका कर्णधार मानिने यि युवापुस्ताहरु यस तर्फ कत्ति पनि गम्भीर छैनन् । यो एउटा चिन्ताको विषय बनेको छ । अहिलेका पुस्ताले फाइदा मात्र बुझ्नु तर त्यसले ल्याउने विकराल समस्यालाई भने नबुझ्नु लाइ अल्पज्ञानको उपजको रुपमा लिन सकिन्छ। तर यसरी आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की लाइ हजमोल जस्तो मानि आखा चिम्लेर पटकपटक प्रयोग गर्नु र यसको प्रयोग ले सरिरमा गर्ने नोक्सानी बारे सचेत नहुनु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्नु हो। स्वास्थ्यमा जटिलता निम्ताउनु हो । स्वास्थ्य जिबन बिना संसार अन्धकार छ ।
र अन्धकार संसारमा जिवन को यात्रा अपुरो, अधुरो र अप्ठ्यारो छ । भन्ने कुरा आजका युवा पुस्ता हरुले बुझ्न आबस्यक छ । तसर्थ आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की लाइ परिवार नियोजनको भरपर्दो साधन जस्तै ठानी बारम्बार प्रयोग गर्नु हुँदैन। यस ७२ घन्टे चक्की लाइ अबञ्छित गर्भ रोक्नको लागी मात्र प्रयोग हुनुपर्दछ ।
परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श औषधिको मात्रा, खाने विधि, गर्भाअवस्था को सामान्य ज्ञान र यसका जटिलता र आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की लिनु अगावै स्वास्थ्य अवस्था बारेमा जानकारी लिएर मात्रै आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की सेवन गर्न वा गर्भपतन गर्ने निर्णयमा पुग्नु उत्तम हुन्छ ।